एमसिसीको ट्रान्समिसन लाईन नेपालमा नजोडेर किन लगियो गोरखपुर ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
एमसिसीको ट्रान्समिसन लाईन नेपालमा नजोडेर किन लगियो गोरखपुर ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ३ माघ शुक्रबार १४:०६
एमसिसीले बनाउने भनिएको ट्रान्समिसन लाइन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर नेपालले नै अरू देशहरूसँगको ग्रीडमा जोड्ने नीतिमा नगएर किन सिधै एमसिसीले सम्झौतामा नै इण्डियासँग ग्रीड सम्झौता गर्नु पर्ने कुरा उठायो ? किन सो लाइन गोरखपुरमा लगेर जोड्ने योजना बन्यो ? यसको कारण र त्यसका पछाडिको साम्राज्यवादी कुनियत बुझ्न एकदमैं जरूरी छ।
एमसिसीले बनाउने भनिएको ४ सय केभी प्रशारण लाईनका लागि नेपालमा दशकौंसम्म बिजुली हुँदैन। त्यसले ईण्डियासँग बिजुली किनेर प्रशारणलाईन चलाउने योजना बनाएको छ । एमसिसी सम्झौतामा इण्डियाको समर्थन खोजिनु र गोरखपुरमा ग्रीड जोड्ने कुरा गर्नुको कारण यही हो । यही कारणले एमसिसीले लाईन निर्माण भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर स्वतन्त्र ढंगले चलाउने आफ्नै स्वायत्त विद्युत नियामक संस्था (इआरसी) बनाएको हो।
एमसिसीको लाईन किन लगियो दमौली हुँदै बुटवलतिर ? यसको कारण पनि स्पष्ट छ( बुटवलको जीतगढीदेखि ३ कि.मी. उत्तर पाल्पाको नुवाकोटमा उजीरसिं थापाको नेतृत्वको नेपाली फौज अंग्रेजहरुसंग लडेको सामरिक डाँडो छ। सो स्थानको लडाईंमा उजीरसिंले जनरल उडको नेतृत्वमा आएको १० हजार बेलायती फौजमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएर लखेटेका थिए।
त्यो सामरिक डाँडोमा पश्चिमाहरुले पहिल्यैदेखि आँखा लगाएका थिए । त्यही डाँडोलाई छोएर जाने गरी ट्रान्समिशन लाईन घुमाएर दमौली पुर्याइएको हो । सो डाँडो कब्जा गरेर त्यहाँ स्याटालाइट प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्टेशन बनाउने तयारीमा अमेरीका छ।
यो षड्यन्त्रमा असर नपुगोस् भनेर त्यसले सम्झौतामा ’अमेरिकी उत्पादनमा असर पुर्याउन नपाईने’ प्रावधानमा सही गराएको छ । अमेरिकी उत्पादन भनेको हतियार उद्योग हो । कदाचित ईण्डियालाई यसमा प्रयोग गर्न नसकिने विश्व परिस्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा लगानी फिर्ता लग्न सजिलो होस् भनेर एमसिसीले ’अमेरिकाको राष्ट्रिय हित पूरा नहुने देखिएको खण्डमा’ सम्झौता एकपक्षीय रुपमा रद्द गर्ने हस्ताक्षर गराएको छ । चीनका विरूद्धमा हतियार स्टेशन बनाउन पाएन भने अमेरिकी साम्राज्यवादले सुको पनि अनुदान दिनेवाला छैन।